11 Qof oo ku waxyeeloowday Qarax ka dhacay Buula-Mareer. | Universal Somali TV
11 Qof oo ku waxyeeloowday Qarax ka dhacay Buula-Mareer.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay Qarax Xoogan oo Galabta ka dhacay Deegaanka Buula-Mareer ee Gobolka Sh.Hoose.
Qaraxa oo ahaa Miinada Dhulka lagu aaso ee Meelaha Fog Fog laga hago ayaa waxaa ku geeiryooday 4 Qof, Halka ay ku dhaawacmeen Todobo Kale, Dadka Dhaawacmay Shan Kmaid ah waa Shacab labada Kalena waa Askar katirsan Ciidanka Dowladda.
Goobta Qaraxa uu ka dhacay oo eheyd Meel Ciidanka ay lacagaha ku qaadaan oo ku taala Suuqa Xoolaha Buula-Mareer ayaa waxaa joogay dad Fara Badan oo Suuqa usoo Shaqo tagay, Maadaama Maalinta Sabtida ay kamid tahay Maalmaha ugu Mashquulka badan Suuqa.
Gudoomiye Kuixgeenka Maaliyada Sh.Hoose C.Fitaax Xaaji Cabdulle, ayaa Warbaahinta Gudaha usheegay in Qaraxa kadib Goobta ay ka sameeyeen baaritaano la xiriirta soo qabshada Kooxihii ka dnabeeyay Qaraxa, Waloow aysan Cidna Gacanta ku soo dhigin.
Cabdulle ayaa ku eedeeyay Shabaab iney ka danbeeyaan Qaraxa oo Ujeekdiisa ugu weyn ahaa sida uu Yiri in lagu Xasuuqo Shacab aan waxba galabsan.
Dadka Dhaawacyada ay ka soo gaareen Qaraxa Miino ayaa loola Cararay Isbitaalo yaryar si loogu dabiibo Xaaladooda Caafimaad, Dadka Dhaawacyada qaba ayaa qaarkood la soo sheegayaa iney Xaaladooda liidato.
Si Kastaba, Gobolka Sh.Hoose ayaa umuuqdan mudooinkan mid amnigiisa ay Faraha ka sii baxeyso, Waxaana Todobaadkii tagay kaliya ka dhacay laba Qarax oo ay ku dhinteen 25 Qof oo ubadan Shacab, Arbacadii waxaa Qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay Suuq lagu iibiyo Qaadka oo ku yaala Wanlaweyn, Waxaana halkaasi ku geeiryooday 15 Qof oo midi uu askari ahaa.
Sidoo Kale Khamiistii Todobaadkii tagay, Qarax ka dhacay Meel 8 KM Bari ka xigto Wanlaweyn, waxaa ku geeiryooday Sagaal iyo askari iyo Taliyohooda oo ay ka soo baxay Saldhiga Mareykanka ee Blaidoogle, Waxeyna ku soo jeedeen Magaalada Muqdihso.
Kan-xigaShirwaynaha Qaran ee dib u eegista Da...
Kan-horeCiidanka Uganda ee ku jira howlgalka ...
40,806,503 unique visits